တရုတ် INT-ZEG Multipin waterproof တံတောင်ဆစ် Connector PCB ဆက်သွယ်ရန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | INTE-AUTO
INT-ZEG Multipin waterproof တံတောင်ဆစ် Connector PCB ဆက်သွယ်ရန်
မော်ဒယ် (INT-ZEG) ။ စီးရီး (0K ... 3k) ။ Key ကို (G) ။ ဆက်သွယ်ရန်; Fixed Receptacle, ခွံမာသီးကိုပြုပြင်တာတွေ, mounting ပြန် panel က။
အောက်ပါအဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူငွေကျပ်စီးရီး connector ကို:
K သည်စီးရီး connectors အထူးသပြင်ပ application များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
သူတို့က plug ကိုအခမဲ့ socket, fixed socket သို့မဟုတ် coupler ကဖွဲ့စည်းအိမ်ရာသို့စိုင်အခဲသို့မဟုတ်အရည်၏ထိုးဖောက်မှုကိုတားဆီးဖို့အတွင်းစိတ်လက်နှစ်ခုဖျံများပါဝင်သည်။ IP68 တစ်ဦးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးညွှန်းကိန်းပေးရ mated တဲ့အခါမှာဒီစီးရီးအားလုံးမော်ဒယ်များ watertight ဖြစ်ကြသည်။
ပုံစံ စီးရီး L ကို M က N ကို တစ်ဦးက B က E ကို အီး S1
INT-ZEG 0K 21,7 3.5 20.1 18 18 3.4 M14x1.0 12.5
INT-ZEG 2K 30,7 3.5 28,6 25 255M20x1.0 18.5
INT-ZEG 3k 36,2 4.5 33,6 30 31 7.5 M24x1.0 22.5
မှတ်ချက်: INT-ZEG.1K.314.CLV: အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရေအတွက်ကဥပမာ "INT-" နဲ့စတင်
တုန်ခါမှု4.Resistance: 15 ဂရမ် [10 Hz-2000HZ] ။
7. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးညွှန်းကိန်း (mated): အိုင်ပီ 68 / အိုင်ပီ 66.
ကများသောအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်ပြင်ပ applications များအမျိုးမျိုးတို့ကိုပေါ်တွင်အသုံးပြုသည်အထူး signal ကိုဂီယာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ, အသံ / ဗီဒီယို, စမ်းသပ်မှုများနှင့်အတိုင်းအတာအဘို့, ဆက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်လိုင်းကို။
INTE-AUTO ဒီဇိုင်း, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွန်းအားပေး-ဆွဲ connector ကိုနှင့်ကေဘယ်လ်ပရိသဖြေရှင်းချက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး။ သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကြမ်းတမ်းလူသိများကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများ enviroments မှာယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်သကျသပွေ။ မူရင်းအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်များနှင့်တာရှည်ခဲအချိန်ဖြေရှင်းဖို့ကိုကူညီပါ။
နောက်တစ်ခု: INT-SC က F စီးရီးမြို့ပတ် Connector အမျိုးသား Plug အမျိုးသမီးဆက်သွယ်ရန်ကွေးကယ်ဆယ်ရေးများအတွက်တစ်ဦးက Nut
ယခင်: 3B 22 pins panel mount socket custom cable assemblies & connectors solution
INT-ZGG ရေစိုခံအမျိုးသမီးကြေးနန်း Connector Fixed ...
INT-TGG K သည်စီးရီး waterproof Push ကိုဆွဲထုတ်ကိုယ်ပိုင်သော့ခတ် ...
INT-ZEG Multipole ရေစိုခံအမျိုးသမီး Connector2...
INT-TGG လမျးဖွောငျ့ Plug IP68 အမျိုးသားလိင် Connecto ...